PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-08-26 - ITSHE SELIZOGAYA NGOMUNYE UMHLATHI KWELAMASHESHI
ITSHE SELIZOGAYA NGOMUNYE UMHLATHI KWELAMASHESHI
Ilanga langeSonto - 2018-08-26 - Izindaba - INTATHELI YELANGA LANGESONTO
UMBHISHOBHI webandla i-anglican enatal, udino Gabriel, uphumele obala wakhuluma ngokuhlukunyezwa nodlame olubhekiswe kwabesifazane.
Uthi itshe lizogaya ngomunye umhlathi manje kuleli bandla mayelana nalolu daba olubucayi olukhathaza izwe lonke.
Uthi ibandla lakhe selenze izibophezelo ezinqala zokulwisana nale nkinga. Umbhishobhi Gabriel nethimba lakhe eliyisipesheli bahlanganise uhlelo oluzokwenza ukuba amapherishi nabaholi bawo bakwazi ukubhekana ngqo nalolu dlame.
Ekhuluma esithangamini sabezindaba ebesisethekwini uthe minyaka yonke ngoncwaba (August) okuyinyanga yabesifazane, kanjalo nangesikhathi somkhankaso obizwa nge-16 Days of Activism Against Gender-based Violence, ibandla lakhe belivamise ukuhlanganyela namanye amabandla eningizimu Afrika yonkana, nazo zonke izinhlangano ezibamba iqhaza emikhankasweni elwisana nokuhlukunyezwa ngokobulili.
Uthi kodwa uma sesidlule leso sikhathi semikhankaso, babuyela emisebenzini yabo ejwayelekile kuze kuphinde kuba wunyaka olandelayo, bese kukhulunywa ngalezi nkinga.
Manje uthi sebethathe isinqumo sokuthi kube wuhlelo abaluqhuba ngaso sonke isikhathi lolu.
Phakathi kwezinhlelo abazozenza njengebandla wukwenza amaworkshop asebandleni azokhuluma ngodlame lobulili; ukusebenzisa umthetho wasebandleni obizwa nge-anglican Pastoral Standards, ukuphenya izigameko noma amacala enzeke esikhathi esedlule nawamanje okungazi- phathi kahle ebandleni, bese kuqaliswa uhlelo lokuqondiswa kobugwegwe.
Uthe bazophinde futhi bavule izigcawu lapho kuzokhulunywa khona ngokuvuleleka ngalezi nkinga, bavule nezindawo eziphephile zokubika amacala, banikezele nangosizo lokweluleka ngokwengqondo labo abahlukumezekile.
“Njengebandla kudingeka ukuba sikhuculule futhi siqinisekise ukuthi sithatha izinyathelo ezifanele ukuvikela amantombazane ethu amancane nabesifazane. Kufanele sihlole nabantu abasezikhundleni ebandleni, ngisho nothisha bakasontosikole.
Lolu wudaba okumele siluthathele phezulu ukuze siqinisekise ukuthi asinazo izimpisi phakathi kwezimvu, kodwa abaholi abahle abathembekile phakathi kwentsha yethu,” kusho umbhoshobhi Gabriel.
UTHI itshe lizogaya ngomunye umhlathi ebandleni lakhe umbhishobhi wamaAnglican enatal, udino Gabriel. Ababandakanyeka ezigamekweni zokuhlukunyezwa kwabesifazane bazozibona ukuthi bafana nobani.